Tencent သည် ဂျပန် ဂိမ်း စတူဒီယို ကိုဒေါ်လာ ၄၄ သန်း ဖြင့် ဝယ်ယူ ခဲ့သည် – Pandaily
Tencent သည် ဂျပန် ဂိမ်း စတူဒီယို ကိုဒေါ်လာ ၄၄ သန်း ဖြင့် ဝယ်ယူ ခဲ့သည်
Nov 11, 2021, 20:38ညနေ 2021/11/12 06:08:35 Pandaily
China Media Feng ၏အဆိုအရ အတွင်းလူ များက ပြောကြားခဲ့သည်Tencent သည် မကြာသေးမီက Wake Interactive ၏ ၉၀% ခန့် ကိုဝယ်ယူ ခဲ့သည်ဂျပန် ဂိမ်း စတူဒီယို ။ ယင္း သေဘာတူညီ မႈသည္ စက္တင္ဘာ လအတြင္း ျဖစ္ ႏိုင္ၿပီး ယန္း ငါး ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၄၄ သန္း) ေက်ာ္ တန္ ေၾကး ရွိ ႏိုင္သည္။ ဒီ သတင္းကို ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု စလံုးက တံု႔ျပန္ ျခင္း မရွိပါဘူး။
Wake Interactive သည် တိုကျို အခြေစိုက် Soleil ၏ မိခင် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Soleil သည် Nintendo Switch အတွက် Ninja ဂိမ်း ကိုတီထွင် ခဲ့ပြီး Travis Strikes: No Heroes ဂိမ်း ကိုထုတ်လုပ် ရန်ကူညီ ခဲ့သည်။
Soleil သည် အရည်အသွေး မြင့်မားသော လုပ်ဆောင်မှု ဂိမ်း များ ကိုတီထွင် ခြင်းကြောင့် လူသိများသည်။ ယခုအချိန်အထိ ကုမ္ပဏီသည် console များ၊ PC များနှင့် စမတ်ဖုန်း များအတွက် လက်ရာ မြောက် များစွာ ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက် မှုရှိစေရန် Tencent သည် Soleil ၏ မိခင် ကုမ္ပဏီ သို့ ချဉ်းကပ် ရသည့် အကြောင်းရင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
လေ့လာသုံးသပ် သူများက Tencent ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီ များအတွက် ၀ ယ်ယူ မှု အားလုံးနီးပါး သည် အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက် မှုမှာ ထူးခြား သည်ဟုဆိုသည်။ ယခင်က Tencent သည် ဂျပန် စျေးကွက် တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အနည်းငယ်သာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အနာဂတ် ဂိမ်း များ၏ နိုင်ငံတကာ မူပိုင် ခွင့်ကို အာမခံ ရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်း Tencent နှင့် NetEase တို့သည် ကာတွန်း နှင့် ဗီဒီယို ဂိမ်း နယ်ပယ်များတွင် တန်ဖိုးရှိသော ဉာဏ ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် များရရှိ ရန်မျှော်လင့် လျက် ဂျပန် နိုင်ငံတွင် အလားအလာ များကို တက်ကြွစွာ စုဆောင်း ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း စီးပွားရေး အပေါ် မှီခို မှုကိုလျှော့ချ နိုင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Tencent Q3 ဝင်ငွေ သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၁၃% တိုးတက် ခဲ့သည်
ဂျပန် ထုတ်ဝ ေရေး ကုမ္ပဏီကြီး Kadokawa,Tencent သည် ၄ င်း၏ အစုရှယ်ယာ ၆. ၈၆% ကိုဝယ်ယူ ရန် ယန်း ဘီလီယံ ၃၀ (ဒေါ်လာ ၂ ၆၃. ၂ သန်း) သုံးစွဲ ရန်စီစဉ် ထားကြောင်း ကုမ္ပဏီက ပြီးခဲ့သည့် လက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဂျပန် ဂိမ်း ထုတ်လုပ်သူ Grasshopper Manufacturing သည် NetEase ၏လက် အောက်ခံ ဖြစ်လာသည်။ Grasshopper Manufacturing ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Killer7 နှင့် No Heroes အပါအ ၀ င် အထင်ကရ ဂိမ်း များဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Industry Nov 11 နိုဝင်ဘာ 12, 2021